Conference focusing on restoring order in Somalia Dhakhtar Ilkaha oo somali ah oo laga furay magaalada Oslo, Norway Oslo, Norway (Calanka.com) - 22 - Sebtember -2011
Xarun weyn oo dhakhtar ilakaha ah oo ay soomaali maamusho ayaa waxaa dhawaan laga hirgeliyay bartamaha magaalada Oslo, caasimadda dalka Norway.
Xaruntan ayaa waxaa ka howlgala Dr. Abshir C/laahi Jaamac oo ku soo takhasuusay caafimaadka ilkaha, mudana soo shaqeeyay iyo Drsa Mona Cumar Xaaji oo iyadana takahasuus xagga caafimaadka ilkaha qabta.
Kala xiriir xarunta Ilkaha
TELEFON: 22 201 111
�pningstider: Man.-Fre. (09-16)
Maamulha xarunta Dr. Abshir C/laahi J. Nuur oo shabakadda Calanka u waramayay mar ay ku booqatay xarunta ayaa waxa uu u sheegay in uu mudo dheer ku fikirayay in uu furo dhakhtar Ilkaha oo ay bulshadeena Soomaalida aad ugu baahan yihiin.
Xarun ka yar tan uu iminka ka hirgeliyay bartamaha magaalada Oslo, gaar ahaan nawaaxiga Gunnerius ayuu sheegay in uu ku howlgeli jiray mudo lix sano ah taas oo ku taalay xaafadda Gr�nland. Dhanka dumarka waxaa diyaar idin kugu ah xarunta Dressa. Mona Cumar Jaamac oo gacmo furan idin kugu soo dhaweyneysa. Waa dhakhtarkii ugu horeeyay ee Soomaali ah oo laga hirgeliyo magaalada Oslo, waxaana ay ku soo beegmeysaa furitaanka xaruntani xilli soomaali badan ay baahi u qabaan caafimaadka ilkaha oo dalkani Norway aad qaali uga ah.